DRIP - DRIP समुदाय - एक दिन 1%, एक वर्ष 365% कमाउनुहोस्
सम्म उठ्नुहोस् 8% DRIP क्यासब्याक र पुरस्कारहरू तपाईंको DRIP जम्मामा।
कसरी DRIP क्रिप्टो सिक्का किन्ने अनलाइन भिडियो ट्यूटोरियल गाइड।
1 वर्षमा $10,000 बाट $377,834.34 कमाउनुहोस् DRIP समुदाय? एक घोटाला वा झूट को एक प्याक जस्तै ध्वनि? छ DRIP समुदाय एक घोटाला? धेरैजसो मानिसहरूले सोचेकै कुरा हो तर कुञ्जी भनेको एउटा लगानी खोज्नु हो जसले प्रति दिन 1% तिर्छ र यसको जवाफ DRIP मा छ। चीजहरू गर्ने परम्परागत तरिकाको साथ, त्यो लगभग असम्भव हुनेछ तर क्रिप्टोकरन्सीको संसारमा DRIP सँग होइन जहाँ 1000% नाफा सामान्य हो वा पहिले नै भइरहेको छ। बिटकोइनलाई सोच्नुहोस् र मलाई लाग्छ कि तपाईंले मेरो मतलब के पाउनुभयो।
तपाईंले यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु अघि, म तपाईंलाई तल पढ्नको लागि तपाईंको समयको केही मिनेट निकाल्न र छुटेको ठूलो अवसरमा आफूलाई हराउन नदिन अनुरोध गर्दछु।
DRIP भनेको के हो?
DRIP को आधार भनेको तपाईको लगानीमा प्रति दिन 1% तिर्ने सुविधा हो। तपाईले त्यो रकम निकाल्न सक्नुहुन्छ र प्रति दिन DRIP टोकनको आफ्नो 1% रिटर्न प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईले "हाइड्रेट" गर्न सक्नुहुन्छ वा आफ्नो आयलाई पुन: कम्पाउन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ रकमको विरुद्ध 1% कम्पाउन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हाइड्रेटिंग गरेर तपाईले हेर्न सुरु गर्नुहुन्छ 3678% APYs (वार्षिक प्रतिशत उपज - तपाइँले तपाइँको निक्षेपमा ब्याज कमाउँदा तपाइँको पैसा समयको साथमा कति बढ्न सक्छ मापन गर्ने तरिका) वर्षको अन्त्य सम्म (सरलता को लागी शुल्क बाहेक)।
कम जोखिम, उच्च पुरस्कार अनुबंध
ड्रिप नेटवर्कको नल एक कम जोखिम उच्च पुरस्कार अनुबंध हो जुन निक्षेपको उच्च उपज प्रमाणपत्र जस्तै काम गर्दछ। खेलाडीहरूले प्लेटफर्मको स्वैप पृष्ठबाट ड्रिप खरिद गरेर र अर्को प्रयोगकर्ताको ड्रिप टोलीमा सामेल भएर भाग लिन सक्छन्।
नल सम्झौतामा ड्रिप जम्मा गर्दा तिनीहरूको ड्रिपको निष्क्रिय रूपमा दैनिक 1% प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। (365% अधिकतम भुक्तानी)
खेलाडीहरूले नियमित निक्षेपहरू, रोलिङ पुरस्कारहरू र टोली-आधारित रेफरलहरू मार्फत पनि आफ्नो कमाई कम्पाउन्ड गर्न सक्छन्। लगातार दैनिक % रिटर्नको वाचा गर्ने अन्य धेरै प्लेटफर्महरूको विपरीत, नलको सम्झौता समाप्त हुन सक्दैन र सधैं पुरस्कृत गरिएको ड्रिप प्रदान गर्न सक्षम हुनेछ।
DRIP पुरस्कारहरू कहाँबाट आउँछन्?
ड्रिप पुरस्कारहरू सबै ड्रिप लेनदेनहरूमा 10% करबाट आउँछन्।
(छोड्नुहोस् किन्छन् प्लेटफर्मको स्वैप पृष्ठबाट)
तपाईलाई जताततै १०१TP1T कर लगाइन्छ। निक्षेपहरू -10%, दावीहरू - 10%, बेच्छ - 10%, एयर ड्रप्स - 10%, स्थानान्तरण (एउटा वालेटबाट अर्कोमा) — 10%, हाइड्रेट्स — 5%, इत्यादि। यी सबै 1 केन्द्रीय पोखरीमा जान्छन् प्रत्येक दिनको 1% तिर्नको लागि, र किनकी प्रोत्साहन बिक्रीको सट्टा कम्पाउन्ड गर्नु हो, त्यसमा अधिक र अधिक DRIP कर लगाइन्छ। 5%. धेरैजसो मानिसहरू नल भित्र बस्दासम्म साइटको गणित आफैंको लागि भुक्तान गर्न डिजाइन गरिएको हो, जुन DRIP लाई नयाँ उचाइहरूमा चढ्नको लागि तपाईंको सबैभन्दा ठूलो प्रोत्साहन हो।
यदि त्यहाँ कुनै स्थिति छ जहाँ कर पूल ड्रिप पुरस्कारहरू तिर्न पर्याप्त छैन भने, पुरस्कारहरू भुक्तान गरिएको सुनिश्चित गर्न नयाँ ड्रिप मिन्ट गरिनेछ। ड्रिप नेटवर्कको पछाडिको सरल खेल सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्दै, प्रणालीलाई पुरस्कार तिर्नको लागि मिन्ट नयाँ ड्रिप आवश्यक पर्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ। नलमा जम्मा गरिएका ड्रिपहरू जलेको ठेगानामा पठाइने भएकोले र ड्रिपहरू जलाशय सम्झौता मार्फत तरलता पोखरीमा निरन्तर लक भइरहेको छ, DRIP मात्र हो deflationary दैनिक ROI प्लेटफर्म।
DRIP को जादुई सूत्र "हाइड्रेट" वा पुन: कम्पाउन्डिङमा निहित छ!
भुक्तानी DRIP मा छ, डलरमा होइन, त्यसैले तपाईले कुनै पनि मूल्य वृद्धिबाट लाभ उठाउने अवसर पाउनुहुनेछ (साथै मूल्यमा गिरावटबाट पनि पीडित), तर HODL को अभाव, अपस्फीति, र प्रोत्साहनको टोकन ("प्रियको लागि होल्ड गर्नुहोस्। life") DRIP टोकनको मूल्य उठाउन प्रवर्द्धन गर्ने सद्गुण चक्र सिर्जना गर्न टोकनोमिक्स सिर्जना गर्नुहोस्। केवल 91% TVL (कुल मान लक गरिएको) हेर्नुहोस्। टोकनहरूको कुल आपूर्ति मध्ये 9% मात्र व्यापारको लागि उपलब्ध छ।
*टोकेनोमिक्स - शब्द दुई शब्दहरू जोडेर बनाइन्छ टोकन र अर्थशास्त्र। यो क्रिप्टोकरेन्सीले फराकिलो इकोसिस्टम भित्र कसरी काम गर्छ भन्ने अध्ययन हो
DRIP को बारेमा
यसले Defi (विकेन्द्रीकृत वित्त) मा स्मार्ट अनुबंध मार्फत निष्क्रिय आय प्रदान गर्न सक्षम छ। यो Binance स्मार्ट चेन मा सिर्जना गरिएको थियो, र DRIP टोकन BNB बाट किन्न सकिन्छ।
DRIP नेटवर्कको आधिकारिक टोकन Binance स्मार्ट ब्लकचेन (BSC) मा DRIP (BEP-20) हो जसले दुर्लभ, डिफ्लेशनरी, सेन्सरशिप-प्रतिरोधी, र बलियो, साँच्चै विकेन्द्रीकृत ब्लकचेनमा निर्माण गरेर मूल्य कब्जा गर्दछ।
DRIP नेटवर्क Forex_Shark, BB र टोलीद्वारा विकसित गरिएको पछिल्लो परियोजना हो।
1. Binance.com, FTX.com, Binance.US, Bithumb.com, र Kucoin.com जस्ता Cryptocurrency विनिमयहरू BNB प्रस्ताव गर्छन्।
तिनीहरूबाट BNB किन्नुहोस् र वालेटमा राख्नुहोस् (मेटामास्क, वालेट कनेक्ट वा बिनन्स चेन वालेट)
2. मा जानुहोस् ड्रिप फाउन्टेन र DRIP को लागि BNB साटासाट गर्नुहोस्।
2. तपाईंले ड्रिपमा जम्मा गर्नु अघि सामेल हुन मेरो साथीको ठेगाना प्रयोग गर्नुहोस् FAUCET पृष्ठ
साथी ठेगाना: 0xD557c26793758F88053D9988C27aD980d6d87289
(तपाईले ड्रिप किन्नु अघि बडी ठेगाना हुनु आवश्यक छ)
3. कम्तिमा 1 DRIP जम्मा गर्नुहोस् (ग्यास शुल्क तिर्न पर्याप्त BNB छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।)
4. तपाईं DRIP मा सेट अप हुनुहुन्छ। दैनिक 1% प्राप्त गर्न तयार हुनुहोस्!
मा विस्तृत निर्देशनहरू पहुँच गर्नुहोस् कसरी ड्रिप किन्ने
ड्रिप खरिद गर्दा कुनै कठिनाइहरू सामना गर्नुहुन्छ?
इमेल [email protected] वा व्हाट्सएप 88279070 छिटो मद्दतको लागि।